के हो ‘लक डाउन’ ? नेपालमा कस्तो होला ? – Hamrosandesh.com
नेपालमा कोरोना संक्रमण रोक्न ‘लक डाउन’ को तयारीबारे छलफल भएको छ। कोरोना संक्रमण, रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समिति संयोजक उपप्रधानमन्‍त्री ईश्वर पोखरेलले कुनै पनि बेला ‘लक डाउन’ गर्नुपर्ने अवस्था आउनसक्‍ने बताउँदै आएका छन्।
पहिलो चरणको ‘लक डाउन’ पछि पनि अवस्था सामान्य नभए दोस्रो चरणमा ‘लक डाउन’ कडा हुनेछ। नागरिकलाई घरमै अनिवार्य रुपमा बस्‍न आग्रह होइन, आदेश दिइनेछ। आदेश उलंघन गरे कारबाही गर्ने व्यवस्था हुनेछ। यो महामारीबाट बच्‍न लागि एकान्तवास अथवा ‘आइसोलेशन’ मुख्य उपायका रुपमा लिइएको छ। कोरोनाबाट आक्रान्त भएका चीन तथा युरोपका देशहरुले पनि त्यो उपाय कार्यान्वयन गर्न ‘लकडाउन’ को निर्णय गरेका छन्। अन्नपूर्ण